Maitiro Ekuwedzera Emega Chako Mukana wekusvika kuInbox | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 9, 2014 Chipiri, Gunyana 9, 2014 Douglas Karr
Vanhu vazhinji havazive kuti pane musiyano mukuru pakati pe email kuburitswa uye kunyatso kuigadzira kuinbox. Iko kugona kweanopa email sevhisi kuendesa yako email kunotsanangurwa uye kuyerwa sekuburitsa. Asi izvi zvinongoreva kuti pakave nekubviswa ruoko pakati pemaseva ayo email yako yakagamuchirwa. Izvi hazvireve kuti izvozvi zvave mubhokisi rako rekunyora. Hazvina kujairika kuti email ive ne100% kuturika uye 0% yekuiswa mubhokisi reinbox… nemaemail ako ese achienda kufolda ye spam. Unoda mudziyo wezvekushandisa senge Inbox Informant kubva kuvatsigiri vedu pa 250ok kuona kuti urikuita sei nenyaya iyoyo.
Paunotumira email kune rako bhizinesi, iwe unotarisira kuti ingooneka mumabhokisi ako evanyoreri, handiti? Zvakanaka, kune zvakawanda zvakawanda kuti email iendeswe kupfuura zvaungatarisira. Email Service Provider (ESP), senge VerticalResponse, ita zvakawanda kuti uone kuti email yako inozviita kuinbox, asi iwe unoita chikamu mukutakura, futi. Iyi infographic inoratidza zvaunofanira kuita nezvisingaitwe kuti ubatsire maemail ako kuzviita mubhokisi rezvinyorwa, pane kutya Spam folda.
Ini handisi muchibvumirano chakazara na zvose iwo mazano mune ino infographic. Pandaishandira Email Provider Provider, isu taigara tichiita zvakafanana kurudziro; zvisinei, mushure mekubva nekutaurirana nemabhizinesi mazhinji, takaona makambani mazhinji achishandisa zvisirizvo mazita echitatu-bato uye vachishandisa nzira dzinokwezva kutsamwa kweanenge ese Email Service Provider mupi wezano wekuwanisa. Nekudaro, takavaona vasingawane chete mibairo mikuru, pavakaurayiwa mushe kuiswa kwavo kuinbox uye zvichemo zveSPAM zvaive zvisina kusiyana nemakambani aive asina hasha.
Takamhanyira mariri netsamba yedu pachedu. Yakanunurwa zvizere kwemwedzi yakati wandei, isu takachinjisa vanopa kune anozivikanwa email sevashandi uye ivo vakabva varamba runyorwa rwedu neakanyanya-duper runyorwa runyoro rwekutarisa… hurongwa hwevaridzi hwavakashambadzira kune wese munhu seakanakisa pane ese akanakisa. Vakakumbira kuti titumire meseji nyowani kunze uye tikumbire kuti wese anenge achinyorera apinde-mukati mechinyorwa zvakare. Saka… ivo vaida kuti titumire imwe email kutaurirana mushure mekunge tatova nemvumo - hapana nzira!
Takaita nharo kusvikira iyo ESP yatibvumidza kutumira kune yedu runyorwa (kwete - yanga isiri VerticalResponse). Takatumira kune iyo rondedzero… uye hapana kunyunyuta kumwe kwakanyorwa. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti yega yega ESP ine yavo maseva ayo ane mukurumbira iwo avanofanira kuchengetedza chero zvodii. Izvi zvinoreva kuti ivo vanogara vachikanganisa kudivi re zero njodzi. Nehurombo, mabhizinesi haawanzo kushanda mune zero njodzi mamiriro.
Ini handisi kukurudzira SPAMMING vanhu vausina hukama navo. Kungoti kune dzimwe nzvimbo dzegrey iwe dzaungatoshamisika kushanda chaizvo.
Tags: pinda kaviri-mukatiemail kuburitswaemail kutumiraemail frequencyemail kushumaemail chidimbuemail kusainaInboxvasarudze muspamkusazvinyoravertical mhindurovertical kupindurawelcome email